ထူးထူးဆန်းဆန်း collaboration လုပ်လိုက်တဲ့ Samyang x Tony Moly Hot Edition | CosmeticMyanmar
Home » Article » ထူးထူးဆန်းဆန်း collaboration လုပ်လိုက်တဲ့ Samyang x Tony Moly Hot Edition
အရမ်းစပ်ပြီးအရမ်းစားကောင်းတဲ့ နာမည်ကြီး ကိုရီးယားခေါက်ဆွဲအစပ် Samyang Fire Noodles ကို သိကြတယ်ဟုတ်? အခုအဲဒီ Samyang နဲ့ Tony Moly ကနေ makeup set လေးတစ်ခုပေါင်းပြီးဖန်တီးလိုက်တယ်ဆိုရင်? အရမ်းတွေစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းသွားတာကြောင့် တူတူကြည့်လိုက်ရအောင်နော်!
토니모리X불닭볶음면 #화끈한꼴라보 ? 불타는 에디션 제품들을 살~짝 공개해요?? – 9월7일 토니모리에서 만나보세요? 출처- @allurekorea – #불타는에디션 #토니모리 #불닭쿠션 #불닭틴트 #불닭볶음면 #불닭 #불닭토니될꺼야 #얼루어 #buldak #tonymoly #kbeauty
A post shared by 토니모리 공식계정 / TONYMOLY Official (@tonymoly_street) on Sep 5, 2018 at 1:43am PDT
ဒီ Samyang x Tony Moly collection မှာပါဝင်တဲ့ ပစ္စည်းတွေကတော့ BB cushion, Liptint, Lipcare Stick, Cushion Puff, Hair treatment နဲ့ Blusher တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ Samyang နဲ့ပေါင်းထားတဲ့ collection ဖြစ်လို့ packaging တွေအကုန်လုံးက Spicy Noodle ခေါက်ဆွဲဘူးပုံလေးတွေ၊ Sauce အထုပ်လေးတွေပုံစံဖြစ်တာကြောင့် Fire Noodle ကိုကြိုက်တဲ့ ကိုယ်လိုလူတွေအတွက်တော့ ဗိုက်တောင်ဆာလာနိုင်ပါတယ် ? အဲ fire noodle edition လေးတွေမို့လို့ မလန့်ပါနဲ့၊ ပူစပ်စပ်ဖြစ်နေမှာ ခေါက်ဆွဲအနံ့တိုင်းရမှာမျိုးတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ပုံမှန် Tony Moly product တွေရဲ့ fruity scent လေးတွေပဲရမှာပါ။
ဒီ Tony Moly Hot Coverdark Cushion ကတော့ Vanilla နဲ့ Beige ဆိုပြီး shade ၂မျိုးရှိပါတယ်။ Blusher ကတော့ ပုံမှန်အစပ်လို့နာမည်ကြီးတဲ့ original fire noodle ပုံစံ Fire Red နဲ့ ပန်းရောင် Carbonara fire noodle ပုံစံ Carbolighter လို့နာမည်ပေးထားတဲ့ blusher နဲ့ highlighter ဆိုပြီးလာတာကိုတွေ့ရမှာပါ။
Lipsauce Tint ကိုလည်း blusher တုန်းကလိုပဲ original sauce ပုံစံ Super Hot Red နဲ့ Cheese fire noodle ပုံစံ လိမ္မော်ရောင် Cheese Hot Red လို့ထုတ်ထားပါတယ်။ Hair treatment နဲ့ Lipcare ကတော့ version တစ်မျိုးစီပဲရှိပါတယ်။
ဒီ Samyang x Tony Moly collection လေးတွေကို အသုံးပြုချင်တယ်ဆိုရင်တော့ Tony Moly ရဲ့ official website မှာမှာယူနိုင်နေပါပြီ။ မြန်မာနိုင်ငံက outlet တွေမှာတော့ မတွေ့ရသေးတာကြောင့် မြန်မြန်ရောက်လာပါစေလို့ တူတူဆုတောင်းကြရအောင်လားနော်~
image source : www.facebook.com/tonymoly.kr/
Nude Color မှကြိုက်တယ်ဆိုတဲ့ သူရဲကောင်းတွေအတွက် Huda Beauty ရဲ့ New Nude Palette
Tags: BB cushionBlusherliptintMakeupTony Moly